Gadzira Yako Yemagariro Resume | Martech Zone
China, January 24, 2013 Chipiri, February 24, 2015 Douglas Karr
Mune yedu indasitiri, yemagariro tangazve chinhu chinodiwa. Kana iwe uri mukwikwidzi uchitsvaga basa mune zvemagariro midhiya, zvirinani uve netiweki yakakura uye kuvepo pamhepo. Kana iwe uri mukwikwidzi uchitsvaga basa muinjini yekutsvaga, ini zvirinani ndikwanise kukuwana iwe mukutsvaga. Kana iwe uri mukwikwidzi uchitsvaga zvemukati zvekushambadzira basa, ini zvirinani kuti ndikwanise kuona zvimwe zvinozivikanwa zvemukati pane yako blog.
Icho chinodiwa che kugarisana patsva iri kufamba kupfuura indasitiri yedu izvozvi. Makambani uye vashanduri vari kushandisa masocial media saiti uye injini dzekutsvaga - kwete kuti vadzokorore vavhoterwa - asi kunyangwe kuzviwana. Vanogona kukuwana here? Iwe uri kuvaka chiremera pamhepo kune chako wega brand?
Dhijitari yemagariro inotangazve ndeyemazuva ano kutora patsika zvekare. Kunyangwe iwe uchinyatso kuda kusanganisa ruzivo rwako rwebasa uye fundo pane yako yemagariro resume, iwe unogona kuwedzera ruzivo iwe rwaunopa kune vangangove vashandirwi kuti vabatanidze masampuro ebasa, akakodzera ma link uye nezvimwe.
Tags: simbabasa searchrecruitersmuchiutokugarisana patsva
Mandrill: An Email Platform Yekushandisa Kwako
Jan 25, 2013 na2:10 PM
inoshamisa post pane infographic!